Global Voices teny Malagasy » Fantaro Ilay Mpikatroka Miezaka ny Hitondra An-tserasera ny Tanànakelin’i Okraina Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Fantaro Ilay Mpikatroka Miezaka ny Hitondra An-tserasera ny Tanànakelin'i Okraina Iray
Voadika ny 24 Avrily 2017 13:25 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Daish, Elisabeth Lima Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Okraina, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Tsara, Akon'ny RuNet
Orest sy Oksana Olinik ao amin'ny tsenany ao Khrystanivka. Sary: Ethan Daish sy Elisabeth Lima
“Tsy tena mahaliana ahy loatra i Eoropa. Ao Eoropa, efa vita avokoa ny 99 isanjaton'ny zava-drehetra ; eto, mbola misy ny asa tokony hatao”, hoy i Oksana Olinyk, mitsangana ao amin'ny tsenakeliny mampatsiahy ny vanim-potoana sovietika izay vao nosokafan'izy ny vadiny Orest ao an-tanànakelin'i Khrystanivka any afovoany atsinanan'i Okraina. Misy talantalana miisa dimy aoriany izay nofenoiny boky , ireo no hanorenana ny tranomboky voalohany ao an-tanànakely .
“Nisy lehilahy iray tonga tao amin'ny toeram-pivarotana androany ary nahita azy ireo, ary nilaza taminy aho fa azo alaina maimaimpoana ireo,” hoy izy. “Nilaza tamiko izy fa tsy manam-potoana hamakiana satria miasa. Nanontany azy aho hoe: ‘Tsy mipetraka sy mijery fahitalavitra angaha ianao amin'ny hariva?’ Hoy izy: ‘Eny, mazava ho azy’. “
Somary niketrona izy no sady nitsiky . Fantany fa vitany ny asany .
Ny fianakaviana Olinik eo ivelan'ny toeram-pivarotany ao Khrystanivka. Sary: Ethan Daish sy Elisabeth Lima
Milaza ny tenany ho mpikatroka ara-tsosialy i Oksana , fa ho an'i Khrystanivka kosa, dia mihoatra noho izany izy. Avy any Kiev, nifindra tao amin'ny tanànakely efa-taona lasa izay izy sy Orest rehefa tapa-kevitra ny hamelom-bolo indray ny vondrom-piarahamonina sady mitaiza ireo zanany roa lahy kely ihany.
Ao Kiev, niara-niasa tamin'ny ONG i Oksana, ary nanolo-tena amin'ny famahana ny olana eo amin'ny sehatra manerantany izy, ka nahatonga an'i Khrystanivka ho toerana iray tsy nampoizina ho azy sy ny fianakaviany: mponina manodidina eo amin'ny 100 eo no mivelona ao Khrystanivka, izay toerana eny amin'ny havoana ambonin'ny Renirano Sula any amin'ny 140 kilaometatra atsinanan'i Kiev. Toy ny tanànakely Okrainiana maro hafa , mitokana ara-batana sy ara-kolontsaina i Khrystanivka, mihataka amin'ny tanàndehibe maoderina ao amin'ny firenena ary maharitra eo amin'ny adiny telo mahery eo miaraka amin'ny lalana feno lavaka vao tonga any Khrystanivka amin'ny minibus.
Nanapa-kevitra ny hifindra any Khrystanivka i Oksana noho ny fandresen-dahatra fa tsy maintsy hatomboka eny ifotony ny fanovana lovain-jafy. Tiany ny hampiely izany fanovana izany any tanànakelin'i Okraina, amin'ny alàlan'ny fampivoarana sy ny fampidirana ny faritra ambanivohitra midadasika ho ao amin'ny firenena .
Ulas, iray amin'ny zanak'i Olinik roa lahy , ao amin'ny sekoly tranainy ao Khrystanivka, izay nikatona tamin'ny taona 2001. Sary: Ethan Daish sy Elissa Lima
Ny fidirana malalaka kokoa amin'ny aterineto no anisan'ny zavatra iray izay mety hampitombo ny herijikan'ireo izay monina any ambanivohitr'i Okraina . Efa nahitana fanatsarana ny fidirana amin'izany: teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2015, nitombo avo roa heny  tamin'ny 21 isan-jato ho 45 isan-jato ny isan'ny mpisera aterineto manerana ny firenena, ary nahatratra 60 isanjato  ny fidirana tamin'ny Aterineto tao amin'ny firenena tamin'ny herintaona.
Mba hanafainganana ity dingana ity ao Khrystanivka, maniry ny tsenany sy ny trano famakiam-bokiny ho lasa foiben'ny vondrom-piarahamonina i Oksana, izay efa misy solosaina sy aterineto ho an'ny mponina ao an-tanànakely .
Orest sy Oksana. Sary: Ethan Daish sy Elisabeth Lima
” Tsy manana fahafahana miditra amin'ny aterineto ny ankamaroan'izy ireo ary tsy miresaka matetika amin'ny fianakaviany izay monina any an-tanàndehibe na any ivelany,” hoy izy tamin'ny RuNet Echo. “Tena ilaintsika ny solosaina vitsivitsy sy ny Wi-Fi maimaimpoana ho an'ny faritra mba hanombohana izany… toerana mba hahazoana vaovao momba ny zava-mitranga ao amin'ny faritra. Tsy manana hevitra na tetikasa iombonana ny olona eto. Afaka manita-kevitra raharaham-barotra bebe kokoa na mahazo asa mahaleotena amin'ny alalan ‘ny Aterineto sy hivoatra amin'ny fomba mahomby kokoa izy ireo. “
Ao Lokhvytsya, tanàndehibe iray manana mponina miisa 12.000, kilaometatra vitsivitsy any avaratr'i Khrystanivka, nanokatra efitranon-tsolosaina vao haingana ny toeram-pamakiam-boky monisipaly iray izay ahafahan'ny olona mampiasa ny Aterineto maimaim-poana. Mampianatra teny Anglisy amin'ny mpianatra vitsivitsy i Oksana ny talata sy ny alakamisy hariva ao amin'ny efitra iray eny amin'ny faran'ny lalantsara.
Làlana iray ao Khrystanivka. Sary: Ethan Daish sy Elisabeth Lima
Toy ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, mino i Oksana fa zava-dehibe ny fanokafana varavaram-pianarana ho an'ny tanora any Okraina, izay ahitana ny rafi-pampianaram-panjakana mihisatra. Any amin'ny laharana faha-94 amin'ny firenena miisa 138 i Okraina ao amin'ny Tatitry ny Fifaninanana Manerantany  taona 2016-17 amin'ny ambaratonga fanofanana mpampianatra—faha 31 amin'ny firenena eoropeanina eo amin'ny fampianarana. Sarotra indrindra ireo olana ireo any amin'ny faritra ambanivohitra, izay, hoy i Oksana hoe: “ahitana sekoly sasatsasany misy mpampianatra teny anglisy tsy mahay miteny Anglisy akory raha ny marina.” Koa satria miakatra an-tanàndehibe ny mponina ao Okraina ary foana ny tananàkely dia mihafoana araka izany koa ireo sekoly any ambanivohitra .
Na izany aza, mihevitra i Oksana fa afaka manana hoavy mamirapiratra i Okraina : “Afaka manavotra ity firenena ity ny fanabeazana tsara,” hoy izy.
Ireo boky ao amin'ny fivarotan'i Olinik. Sary: Ethan Daish sy Elisabeth Lima
Raha iverenana ny ao amin'ny fivarotana, tsy lavitra ny arabe ao an-tanànakely, feno boky maro hafa hita eo amin'ny talantalana, miampy vokatra maro isan-karazany ihany koa. Feno fanantenana, tsy mieritreritra afa-tsy ny hanosika an'i Khrystanivka mba handroso hatrany i Oksana .
“Arakaraka ny maha betsaka ny olona mandray anjara amin'ny fanovana izay mitady fianarana sy traikefa tsara kokoa no maha betsaka kokoa ireo olona mahatakatra fa afaka manova tsikelikely ny fivoarana izy ireo,” hoy izy. “Tsy ny fahatongavan'ny mpanjaka tsara fanahy na ny filoham-pirenena izay tokony andrasanareo no hamonjy anareo fa isika no mpanjakan'ny tontolontsika.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/24/98232/
 nitombo avo roa heny: http://en.mediasat.info/2016/03/01/broadband-internet-in-ukraine/
 nahatratra 60 isanjato: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/proniknennya_internetu_v_ukraini_vpershe_perevischilo_60/
 Tatitry ny Fifaninanana Manerantany: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf